DxOMark akara igwefoto n'ihu nke Huawei P30 Pro | Gam akporosis
DxOMark akara igwefoto n'ihu nke Huawei P30 Pro
El Huawei P30 Pro, nke e oru na P30 na mmemme mmemme na Paris, France n'ọnwa gara aga, ọ bụ ugbu a ngwaọrụ ndọtị na ogo DxOMark, nwere 112 isi.
Ọ bụ ezie na ọnụego ahụ bụ nke kamera azụ nke ngwaọrụ n'ozuzu ya, amataghị ihe mmetụta ihu n'ihu ọ na-ebu amaghị ... ruo ugbu a. DxOMark anwalewo ma jiri ya kpọrọ ihe. Mara ka o siri gaa!
Igwefoto ihu DxOMark dị n'ihu maka P30 Pro bụ akara 89. Na nkọwa zuru ezu, maka foto, ngwaọrụ ahụ nwetara ihe 90, ebe ọ ruru 88 isi maka vidiyo, na-eji snapper n'ihu. Site na akara ndị a, ọ nọ n'ọkwa nke anọ n'ogo ogo. (Chọpụta: Gini mere na Huawei egosighi akara DxOMark nke P30?)
Huawei P30 Pro akara na DxOMark
El Samsung Galaxy S10 Plus n'elu udi, jiri ihe 96, sotere ya Google Pixel 3 na Samsung Galaxy Note 9, nke nwetara ihe 92. Ee OK Huawei P30 Pro karịrị mobiles ndị a na ngalaba a, n'elu ndepụta DxOMark maka igwefoto azụ.
Dị ka nyocha, ka anyị ghara ichefu na flagship nke ụlọ ọrụ China kwadebere a 32 MP n'ihu ihe mmetụta na uru AI, HDR + nkwado na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. Na azụ, o nwere ihe mmetụta igwefoto anọ: 20 MP (f / 2.2) lens dị oke obosara, oghere 40 MP (f / 1.6) obosara, 8 MP (f / 3.4) lens telephoto na ToF (Oge Flight) ihe mmetụta.
Ọnụ ya nwere a 6.47-anụ ọhịa curved FullHD + OLED ngosi na o nweghi ihe ekweisi; kama, ọ na - eji teknụzụ igwe na - egosipụta ụda site na ihuenyo.
Huawei P30 Pro ule igwefoto, nke kacha mma n'ụwa?
N'okpuru, a na-eji aka ya eme ya HiSilicon Kirin 980 nhazi, tinyere 8GB RAM na ihe ruru 512GB nke nchekwa dị n'ime.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » DxOMark akara igwefoto n'ihu nke Huawei P30 Pro
Xiaomi ga-eweta Redmi ọhụrụ n’izu na-abịa